Facebook အကောင့်ကိုပိတ်နည်း၊ ပယ်ဖျက်နည်း၊ အိုင်ဖုန်းသတင်း
Ignacio Sala | | အိုင်ပက်, သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ်
လူမှုကွန်ယက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အခြားသူများနှင့်မည်သို့ဆက်ဆံသည်ကိုများစွာအတိုင်းအတာအထိပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်မှုတွင်သူတို့နှင့်အတူအဆောက်အအုံများစွာကိုသူတို့ယူဆောင်လာခဲ့သည်မှာသေချာသည်။ အချို့သော - ဆာဗာအပါအ ၀ င်အချို့သည်တစ်နည်းအားဖြင့်အလွန်များပြားသည်ဟုထင်ကြသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အမှုကိစ္စနှင့်သင် Zuckerberg ကုမ္ပဏီကြီး၏အောင်မြင်မှုများကိုလုံလောက်စွာရရှိထားပါကမထိတ်လန့်ပါနှင့်။ သင်၏ Facebook အကောင့်ကိုခေတ္တပိတ်ထားနိုင်သည် သင့်ကိုယ်ပိုင် iOS စက်မှသို့မဟုတ်သင်၏မကျေနပ်မှုသည်ကြီးမားပါက၎င်းကို browser မှလုံးဝဖျက်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
Facebook ကဲ့သို့၎င်းသည်ဂူဂဲလ်ကဲ့သို့အချက်အလက်ကောက်ယူသည့်စက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဘယ်သောအခါမျှငြင်းဆိုခြင်းမရှိသော်လည်းလူများသည်ဤကုမ္ပဏီကျွန်ုပ်တို့အားမည်မျှအထိသိရှိနိုင်သည်အထိ၎င်းတို့သည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရသေးပါ။ သင်၏လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုကန့်သတ်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏အကောင့်ကိုလုံးဝဖျက်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှုနှင့်ပတ်သက်သော Facebook ၏ကတိများသည်လိမ်လည်မှု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာများကိုစျေးကွက်သို့တင်ပို့ရန်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များကိုခွင့်ပြုပုံ၊ Instagram နှင့် WhatsApp တို့နှင့်ပူးပေါင်းလိုသည့်ပေါင်းစည်းမှုကိုအကြိမ်ကြိမ်စစ်ဆေးပြီးနောက်၊ အချိန်ရလာသည်။ ငါတို့အကောင့်ကိုပိတ်ပါ ဒီမှာငါတို့မင်းကိုပြမယ် သင်၏ Facebook အကောင့်ကိုမည်သို့ပိတ်နည်းသို့မဟုတ်ဖျက်နည်း။
1 Facebook အကောင့်ကိုပိတ်ခြင်း (သို့) ပယ်ဖျက်ခြင်းတို့ရဲ့ကွာခြားချက်
2 သင်၏ Facebook အကောင့်ကိုခေတ္တပိတ်ခြင်း
6 ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်အားမသန်စွမ်းသူတစ် ဦး သို့မဟုတ်ကွယ်လွန်သူတစ် ဦး အားမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နည်း
Facebook အကောင့်ကိုပိတ်ခြင်း (သို့) ပယ်ဖျက်ခြင်းတို့ရဲ့ကွာခြားချက်
ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်နှင့်အတူဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရပါမည်။ Facebook သည်အသုံးပြုသူများအားနှစ်ကြိမ်တွေးစရာမလိုဘဲစာရင်းသွင်းခြင်းကိုမလိုချင်။ ကျွန်ုပ်တို့အကောင့်ကိုရပ်ဆိုင်းစေခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းကိုတိုက်ရိုက်ဖျက်ပစ်ခြင်းကိုခွင့်ပြုထားသည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်ကိုပိတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်ခြင်းသည်အဘယ်သို့ကွာခြားသနည်း။
ငါတို့ Facebook အကောင့်ကိုပိတ်ထားပါ:
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် Facebook Messenger messaging platform ကိုအသုံးပြုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့မက်ဆေ့ခ်ျများပြောဆိုမှုများတွင်ထိုမက်ဆေ့ခ်ျများကိုဆက်လက်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်။
ငါတို့ Facebook အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်မယ်ဆိုရင်:
ပယ်ဖျက်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်သည်တောင်းခံမှုမှရက်ပေါင်း ၉၀ အထိကြာနိုင်သည်၊ အရံသိမ်းဆည်းမိတ္တူများအပါအဝင်ဖေ့ဘွတ်မှကျွန်ုပ်တို့သိမ်းဆည်းထားသောဒေတာအားလုံးကိုလုံး ၀ ပယ်ဖျက်သည်အထိ။ ထိုအချိန်အတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့အကောင့်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်မရှိပါ။
ဖယ်ရှားရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုချက်ချင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှသူတို့သည်နှစ်ကြိမ်စဉ်းစားလျှင်ဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မစတင်မီရက်အနည်းငယ် (မည်မျှသတ်မှတ်သည်ကိုအတိအကျမသိ) စောင့်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုကာလအတွင်းသင်၏အကောင့်ကို ၀ င်ရောက်ရန်ကြိုးစားပါက၊ အကောင့်ဖျက်ခြင်းကိုအလိုအလျောက်ဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။
သင်၏ Facebook အကောင့်ကိုခေတ္တပိတ်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်းစေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်၊ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အရာများအားလုံးကို iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch မှတိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်၊ အောက်ပါအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်
လျှောက်လွှာကိုဖွင့်ပြီးတာနဲ့ငါတို့သွားပါ setting များကိုလျှောက်လွှာ၏ညာဘက်အောက်ထောင့်တွင်ရှိသောအလျားလိုက်မျဉ်းကြောင်းသုံးခုဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်။
ထို့နောက်ကိုနှိပ်ပါ ဆက်တင်များနှင့် privacy ပြီးတော့၌တည်၏ configuration ကို.
အတွင်း configuration ကို, ငါတို့အပိုင်းကိုသွား သင်၏ Facebook အချက်အလက် ကိုနှိပ်ပါ အကောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု။
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကလစ်နှိပ်ပါ ပိတ်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်း ပြီးတော့ငါတို့ရွေးလိုက်တယ် အကောင့်ကိုပိတ်ထားပါ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အောက် ဤအကောင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့်ရပ်ဆိုင်းလိုသည်ကိုမေးမြန်းလိမ့်မည်။ အကောင့်ပိတ်ထားပေမယ့်လည်း Facebook Messenger ကိုဆက်လက်အသုံးပြုခွင့်ပေးပါတယ်။
Facebook အကောင့်အားရပ်ဆိုင်းစေသည့်အကြောင်းရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ပြီးပါက Deactivate ကိုနှိပ်ပါ။ အဲဒီအခြိနျမှာ အက်ပ်သည်အလိုအလျောက်ထွက်သွားလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်ပိတ်ထားသည်ကတည်းက။
သင်သည်သင်၏စိတ်ကိုဖွင့်စေပြီ။ ဤလူမှုကွန်ယက်နှင့်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာအဖြေမရှိပါ။ သင်တစ်ယောက်မှမထိခိုက်ခင်သင်၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုလျှော့ချချင်သည်။ ငါမင်းကိုစီရင်မယ့်သူမဟုတ်ဘူး၊ ဒါဆိုမင်းဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာငါပဲပြောမယ်။
ထို့နောက်ကိုနှိပ်ပါ ဆက်တင်များနှင့် privacy နောက်ပိုင်းတွင် configuration ကို.
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကလစ်နှိပ်ပါ ပိတ်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်း ပြီးတော့ငါတို့ရွေးလိုက်တယ် အကောင့်ကိုဖျက်ပါ
နောက်ဆုံးတွင် Delete account ကိုနှိပ်ပါ။ လာမယ့်ပြတင်းပေါက်၌, ငါတို့ကို Facebook ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားဝှက်ကိုတောင်းပါလိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင့်၏တရားဝင်ပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်။ လျှောက်လွှာထွက်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါကိုလုပ်ပြီးတာနဲ့၊ သင်၏အကောင့်တွင်သိမ်းဆည်းထားသောမည်သည့်အချက်အလက်ကိုမဆိုပြန်လည်ရယူရန်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဖျက်ပစ်မည်မဟုတ်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်သင်၏ပရိုဖိုင်းတွင်သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိသောဒေတာများဖြစ်သည်။ သင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကောင့်များမှတတိယပါတီများနှင့်သင်ပြောဆိုဖူးသည့်မိတ္တူများ။
လူမှုကွန်ယက်ကိုသုံးနိုင်ရန်အတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်မှာထိုသူသည်အသက် ၁၃ နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသေးစားအကောင့်တစ်ခုကိုဖျက်လိုလျှင်၊ Facebook အကောင့်ကိုသတင်းပို့ပါ။
မသန်စွမ်း (၁၃) နှစ်အောက်ကလေး၏မှတ်တမ်းကိုတင်ပြပါ။ အောက်ပါအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြရမည် -
Facebook က အသေးအဖွဲ၏အကောင့်ကိုသင်ဖျက်သိမ်းပါကမည်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအကြောင်းကြားမည်မဟုတ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်ကြားမှုသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ပို့သောပရိုဖိုင်၏လင့်ခ်ကိုအခါအားလျော်စွာသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ဖိအားပေးခံရလိမ့်မည်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်ကလေး၏အရွယ်ကိုသေချာစွာစစ်ဆေးနိုင်ပါကလူမှုကွန်ယက်ရှိအကောင့်ကိုဖျက်ပစ်မည်ဟု Facebook ကဆိုသည်။ အကယ်၍ အခြားတစ်ဖက်မှကြည့်လျှင်၊ ကလေးကအသက် ၁၃ နှစ်အောက်ဖြစ်ကြောင်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာမသက်သေပြနိုင်လျှင်၊ သူတို့အကောင့်အပေါ်မည်သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖခင်၊ မိခင်သို့မဟုတ်တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူမဟုတ်လျှင်အခြားအပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကိုဖော်ပြသည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်အားမသန်စွမ်းသူတစ် ဦး သို့မဟုတ်ကွယ်လွန်သူတစ် ဦး အားမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နည်း
မိသားစု ၀ င်တစ် ဦး သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ် ဦး သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ကာယပိုင်းအရမသန်မစွမ်းဖြစ်နေလျှင်သို့မဟုတ်သူတို့သေဆုံးပြီးဖြစ်ပါက သင်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်ကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းသည်အဓိပ္ပါယ်မရှိပါလူမှုကွန်ယက်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးသည် ဒီ link ကတဆင့်လုံးဝဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
အဲဒါကိုမေးဖို့ မသန်စွမ်းသူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏ Facebook အကောင့်ကိုပယ်ဖျက်ပါ အောက်ပါအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြရမည် -
မသန်စွမ်းသူသို့မဟုတ်ကွယ်လွန်သူ၏ကိုယ်ရေးရာဇ ၀ င်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ Facebook ကဖြစ်နိုင်ခြေလေးခုကိုပေးသည်။
ပြီးခဲ့သည့်အခန်းကကဲ့သို့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်ရှိစရာမလိုပါဘူး ဤအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖျက်သိမ်းခြင်းတောင်းဆိုမှုကိုလုပ်ငန်းစဉ်ထွက်သယ်ဆောင်ရန်။
ဤအခါသမယတွင် ဖေ့စ်ဘွတ်ကငါတို့အတွက်သိပ်မလွယ်ပါဘူး ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ဖျက်ချင်သော Facebook အကောင့်နှင့်မည်သည့်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိနိုင်လောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ် » သင်၏ Facebook အကောင့်ကိုပိတ်နည်းသို့မဟုတ်ဖျက်နည်း
Lyd, Apple Watch ဖြင့်သင်၏ Sonos ကိုထိန်းချုပ်ရန်တရား ၀ င်အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်